Zvaungaita Kuti Usapopotedzana Newawakaroorana Naye | Mazano Okubatsira Mhuri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Mongolian Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuChile Myanmar Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Iwe newawakaroorana naye muri kutadza here kutaurirana makadzikama? Unonzwa here sokunge uri kufamba munzvimbo ine zvimbambaira zvokuti chero chawada kuti utaure chichatoita kuti mupopotedzane?
Kana zviri izvo zviri kuitika, usaora mwoyo, zvinhu zvinogona kuita nani. Asi chokutanga chaunofanira kuziva ndechokuti, chii chinoita kuti iwe nemumwe wako mupopotedzane kudaro.
Mumwe mudzimai anonzi Rumbidzai * anoti: “Dzimwe nguva pandinotaura zvimwe zvinhu nemurume wangu iye anozvitora neimwe nzira. Kana kuti ndinenge ndiine chokwadi chokuti ndamuudza chimwe chinhu nepo ndisina kuzozvitaura. Izvi ndizvo zvaiitika!”
Pasinei nokuti munonyatsopindirana zvakadii nomumwe wako, mafungiro enyu pane zvimwe zvinhu achatoti asiyane. Nemhaka yei? Nemhaka yokuti hakuna vanhu vaviri vanofunga zvakanyatsofanana. Musiyano uyu unogona kuita kuti imba inakidze kana kuti ive nematambudziko. Asi kune vakaroorana vakawanda, musiyano uyu unokonzera makakatanwa.
Muenzaniso wakaipa wevabereki.
“Baba namhamha vangu vaipopotedzana kakawanda uye vaikandana magaramwoyo,” anodaro mumwe mudzimai anonzi Rachel, “saka ini pandakazoroorwa matauriro aiita mai kuna baba vangu ndiwo andakanga ndava kuita kumurume wangu. Ndakanga ndisina kudzidza kuti ndinomuremekedza sei.”
Kazhinji kupopotedzana kunoitika kunenge kuchikonzerwa nezvimwe zvinhu kwete zvaitika musi iwoyo. Somuenzaniso, murume kana kuti mudzimai vanogona kutanga kupopotedzana kana mumwe akaudza mumwe wake kuti “Unogara uchinonoka!” Kazhinji kutaura uku hakurevi kuti mumwe wake haabati nguva, asi kuti anenge uchiona sokuti mumwe wake haana hanya nemanzwiro ake.
Chero chingava chichiita kuti mupopotedzane, kugara muchipopotedzana kunogona kukurwarisai kana kuti kuzoita kuti mupedzisire marambana. Saka zvii zvamungaita kuti musapopotedzane?
Mushonga wokudzivisa kupopotedzana kuziva kuti chii chinokonzera kuti mupopotedzane. Zvinhu pazvinenge zvadzikama, edza kuita zviri pasi apa nemumwe wako.
1. Mumwe nomumwe ngaanyore pabepa chakakonzera kuti mupopotedzane munguva pfupi ichangopfuura. Somuenzaniso, murume anganyora kuti, “Waenda kunotandara neshamwari dzako ukabva wati nyaa uriko.” Mudzimai anganyorawo kuti, “Uri kugumbukira kuti ndaswera ndiine shamwari dzangu.”
2. Musingatsvakirani mhosva, edzai kukurukura zvinotevera: Asi nyaya iyi inyaya hombe here? Hazviiti here kuti tingosiyana nayo? Pane dzimwe nguva, zvinenge zvakanaka kuti ungobvuma mafungiro omumwe wako kunyange akasiyana neako muine chinangwa chokuti muve norugare nyaya yacho yopera murudo.—Zano reBhaibheri: Zvirevo 17:9.
Kana iwe nomumwe wako mukaona kuti nyaya yacho yanga iri nyaya duku, kumbiranai ruregerero nyaya yacho yobva yapera.—Zano reBhaibheri: VaKorose 3:13, 14.
Asi kana mumwe achiona sokuti nyaya yacho ihombe kana kuti mose muchiona saizvozvo, endai padanho rinotevera.
3. Nyorai pasi manzwiro amakaita pamaipopotedzana. Somuenzaniso, murume anganyora kuti, “Ndakanzwa sokuti wakaona shamwari dzako senge dzinokosha kundidarika.” Mudzimai anganyora kuti, “Ndakanzwa sokuti waindibata sekamwana kaduku kanofanira kutaura kuti baba iye zvino ndava kumboita zvakati.”
4. Chichinjanai mapepa moverenga zvanyorwa nemumwe nomumwe. Pakupopotedzana kwamaiita, mumwe wako ainyanya kunetseka nezvei? Kurukurai kuti mumwe nomumwe wenyu aigona kunge akaita sei kugadzirisa dambudziko iri pasina kupopotedzana.—Zano reBhaibheri: Zvirevo 29:11.
5. Taurai kuti zvii zvamadzidza pakugadzirisa nyaya nenzira iyi. Mungashandisa sei zvamadzidza pakugadzirisa dambudziko nguva inotevera?
^ ndima 7 Mazita akachinjwa.
“Munhu anofukidza kudarika anotsvaka rudo.”—Zvirevo 17:9.
“Rambai muchishivirirana nokukanganwirana nomwoyo wose.”—VaKorose 3:13.
“Benzi rinobudisa hasha dzaro dzose, asi munhu akachenjera anoramba akadzikama kusvikira pakupedzisira.”—Zvirevo 29:11.
KANA MAKAMBOPOPOTEDZANA . . .
Tsvakai mudzi wedambudziko: Kana mukasanzwisisana, mumwe nemumwe wenyu anofanira kutsvakei? Anofanira kutsvaka chakonzera kuti pave nedambudziko.
Fungai nezvezvakaitika pamaipopotedzana: Panzvimbo pokupopotedzana, pauviri hwenyu mumwe nomumwe aifanira kunge akaita sei kugadzirisa dambudziko rakanga ramuka?
Kana nyaya yacho yanga iri nyaya duku, kumbiranai ruregerero nyaya yacho yobva yapera
Zvamungaita Kuti Muwirirane
Zvinhu 4 zvinogona kukubatsira kuti iwe newawakaroorana naye musakakavadzana asi mutaurirane murugare.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zvamungaita Kuti Musapopotedzana
g 3/13 pp. 4-5
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku MUKAI! Kuenda Kunze Kwenyika​—Uchitsvaka Upenyu Huri Nani
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe MUKAI! Kuenda Kunze Kwenyika​—Uchitsvaka Upenyu Huri Nani
Kuenda Kunze Kwenyika​—Uchitsvaka Upenyu Huri Nani
MUKAI! Kuenda Kunze Kwenyika​—Uchitsvaka Upenyu Huri Nani